သူမတို့ဘ၀ထဲကို ထပ်မံရောက်ရှိလာတော့မယ့် သမီးငယ်လေးကြောင့် ရင်တွေခုန်နေတဲ့ ချမ်းချမ်း – Cele Posts
သူမတို့ဘ၀ထဲကို ထပ်မံရောက်ရှိလာတော့မယ့် သမီးငယ်လေးကြောင့် ရင်တွေခုန်နေတဲ့ ချမ်းချမ်း
ပရိသတ်ကြီးရေ ချမ်းချမ်းဟာဆိုရင် ဂီတလောကမှာ အောင်မြင်မှုတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို တစ်ခဲနက်ရရှိထားသူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ယခုဆိုရင် သူမကို အရမ်းချစ်ပြီး တန်ဖိုးထားတဲ့ ခင်ပွန်းရယ် သမီးကြီးရယ်နဲ့အတူ ဘ၀ကို ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာ ဖြတ်သန်းနေပြီး မကြာခင်ရောက်ရှိလာမယ့် သမီးငယ်လေးကို ရင်ခုန်စွာနဲ့ စောင့်မျှော်ကြိုဆိုနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်။
အဆင်မပြေတဲ့ အိမ်ထောင်ရေး အခြေအနေတွေရှိခဲ့ပေမယ့် သူမရဲ့လက်ရှိ အခြေအနေကိုပဲ ဂရုစိုက်ပြီး အတတ်နိုင်ဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဖန်တီးနေခဲ့ပါတယ်။ ချစ်သမီးလေးကလည်း မေမေ့ဗိုက်ထဲက ကလေးလေးကို မြင်တွေ့ချင်နေပြီဖြစ်ပြီး ကစားဖော်အသစ်လေး ရတော့မှာမို့ ပျော်မဆုံးဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။
ရင်သွေးလေးကို တန်ဖိုးထားတဲ့ အကြောင်း ” So proud to beamom! Pregnancy is the best moment for every woman. Moms are the most beautiful persons in the world…!!! You cannot imagine how happy they are for their future baby. Welcome to our world ” ဆိုပြီး ရင်ဖွင့်ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။
သူမတို့ဘဝထဲကို ထပျမံရောကျရှိလာတော့မယျ့ သမီးငယျလေးကွောငျ့ ရငျတှခေုနျနတေဲ့ ခမျြးခမျြး
ပရိသတျကွီးရေ ခမျြးခမျြးဟာဆိုရငျ ဂီတလောကမှာ အောငျမွငျမှုတှကေို ပိုငျဆိုငျထားပွီး ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးခဈြခငျမှုကို တဈခဲနကျရရှိထားသူတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ယခုဆိုရငျ သူမကို အရမျးခဈြပွီး တနျဖိုးထားတဲ့ ခငျပှနျးရယျ သမီးကွီးရယျနဲ့အတူ ဘဝကို ပြျောရှငျခမျြးမွစှေ့ာ ဖွတျသနျးနပွေီး မကွာခငျရောကျရှိလာမယျ့ သမီးငယျလေးကို ရငျခုနျစှာနဲ့ စောငျ့မြှျောကွိုဆိုနတောပဲ ဖွဈပါတယျနျော။
အဆငျမပွတေဲ့ အိမျထောငျရေး အခွအေနတှေရှေိခဲ့ပမေယျ့ သူမရဲ့လကျရှိ အခွအေနကေိုပဲ ဂရုစိုကျပွီး အတတျနိုငျဆုံးနဲ့ အကောငျးဆုံးဖွဈအောငျ ဖနျတီးနခေဲ့ပါတယျ။ ခဈြသမီးလေးကလညျး မမေဗေို့ကျထဲက ကလေးလေးကို မွငျတှခေ့ငျြနပွေီဖွဈပွီး ကစားဖျောအသဈလေး ရတော့မှာမို့ ပြျောမဆုံးဖွဈနခေဲ့ပါတယျ။
ရငျသှေးလေးကို တနျဖိုးထားတဲ့ အကွောငျး ” So proud to beamom! Pregnancy is the best moment for every woman. Moms are the most beautiful persons in the world…!!! You cannot imagine how happy they are for their future baby. Welcome to our world ” ဆိုပွီး ရငျဖှငျ့ပွောပွလာခဲ့ပါတယျ။
ဇာတ်လမ်းတွဲမင်းသား မင်းသမီးတွေကို ချစ်သူတော်သင့်ကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ခေးဆက်သွင်
အလုပ်လုပ်ပြီး ကြိုးစားရှာထားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေနဲ့ သိန်းပေါင်းထောင်ချီတန်တဲ့ ကားကြီးကို ၀ယ်ယူလိုက်တဲ့ နေခြည်ဦး